Ny drafitry ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ho an'ny Tel Aviv sy Jaffa dia mametraka fironana vaovao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny drafitry ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ho an'ny Tel Aviv sy Jaffa dia mametraka fironana vaovao
Ny dia sy fizahan-tany Tel Aviv sy Jaffa dia midika tora-pasika tsy fahita firy manana kalitaon'ny tanàn-dehibe mamiratra; fifangaroana kolontsaina, zavakanto, fiainana amin'ny alina, sehatry ny fandrahoan-tsakafo, toerana malalaka sy manasa ho an'ny daholobe, famantarana ny haitao sy ny fanavaozana ary ny soatoavina maro karazana sy mamorona; Jaffa, izay manambatra ny vakoka, tantara, fivavahana ary kolontsaina marobe.
Ireo tranokala fizahan-tany no ho lohalaharana amin'ny fizahan-tany Israel mandritra ny folo taona ho avy. Ron Huldai, Ben'ny tanànan'i Tel Aviv-Jaffa, Udi Carmeli, injenieran'ny tanàna ary Eitan Schwartz, tale jeneralin'ny Tel Aviv Global, dia nanolotra ny drafitra lehiben'ny fizahantany mandritra ny folo taona ho avy
Raha ny angom-pikarohana, tamin'ny taona 2018 dia mpizahatany 2,200,000 teo no nitsidika an'i Tel Aviv-Yafo.
Ny singa efatra amin'ny drafitra mavesatra ho an'ny fizahantany any Tel Aviv-Yafo dia misy:
Ny tanàna amin'ny maha toerana fizahan-tany azy. Mpihaino kendrena, marika ary marketing: Mifantoka amin'ny mpijery sy ny fizahantany fizahan-tany mba hahatsapany ny mety ho vitan'izy ireo ao an-tanàna - fanoloran-tena ezaka lehibe hampiantranoana fihaonambe iraisam-pirenena, fanitarana hetsika mba hampifanarahana ny vokatra Tel Aviv amin'ny toetra mampiavaka ny mpanatrika sinoa, manasongadina ny toerana misy ny tanàna ao anatin'ny tantaram-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka jiosy, ary fanitarana serivisy sy manintona ho an'ny fianakaviana manan-janaka.
Toetra manintona, tranokala fizahan-tany ary fotodrafitrasa fizahan-tany: Ny fametrahana sy fampiroboroboana ireo fizahan-tany fizahan-tany, serivisy ary fotodrafitrasa ary fanatsarana ny traikefa fizahan-tany ao an-tanàna. Mampiroborobo fisarihana vaovao isan-taona, ao anatin'izany ny fisarihana «tsy maintsy mahita» ao an-tanàna sy ny fahazoana miditra atiny misy an'ireo mpizahatany amin'ny alàlan'ny ivon-toerana fampahalalana, famantarana sy fitaovana fitarihana, fidirana amin'ny fiteny, fotodrafitrasa fitaterana sy maro hafa.
Ny fampandrosoana ny hotely sy ny fizahantany fizahan-tany: Ampitomboina ny famatsian-efitrano amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fananganana trano fandraisam-bahiny vaovao, manasongadina ny fanovana ny tranon'ny birao ho hotely ary ny fiezahana mifehy ny tsenan'ny fanofana ho an'ny mpizahatany. Ny tanjona: ny fampitomboana ny isan'ireo efitranon'ny hotely ao an-tanàna ao anatin'ny folo taona (efitrano fandraisam-bahiny 10,500 12,000 ankehitriny). Efitra fandraisam-bahiny fanampiny miisa XNUMX no efa nekena.
Fitantanana ny fizahan-tany manan-tsaina sy mitambatra ao an-tanàna: Ny fampidirana ireo fantsom-pivezivezena izay misy, inter alia, ny sampana fampivoarana ny fizahan-tany ary ny sehatry ny fampandrosoana hotely; Fampitomboana ny teti-bola ho an'ny hetsika sy ny fahaizana mitaona, raha mamindra ny fitantanana ny tanàna eran-tany amin'ny fomba fandraharahana sy mametraka andrim-pitantanana.
Vaovao misimisy momba an'i Israel:
Antso iray ho an'ny governemanta Karaiba handoa hetra amin'ny sehatry ny fitsangantsanganana an-tsambo ary kely kokoa ny mpandeha amin'ny hetra
Tiorkia, Tonizia ary Egypt no tompon'andraikitra amin'ny krizy fizahan-tany any Bulgaria?